बेजिया एक वेबसाइट हो जुन ठूलो एबी इन्टर्नेट समूहको अंश हो। हाम्रो पृष्ठ आजको महिलालाई समर्पित छ, एक स्वतन्त्र, कडा परिश्रम गर्ने महिला। बेजियाको उद्देश्य पाठकलाई फेसन, सौन्दर्य, स्वास्थ्य र मातृत्वको बारेमा नयाँ समाचारहरू उपलब्ध गराउनु हो।
हाम्रो टीमका सम्पादकहरू मनोविज्ञान, शैक्षिक कला, फेशन र सौन्दर्य वा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा विशेष छन्। तिनीहरूको फरक पेशेवर शाखाहरूको बावजुद, तिनीहरू सबै साझा लक्ष्य साझा गर्छन्, कुराकानीको लागि एक जुनून। बेजिया सम्पादकीय टीमलाई धन्यवाद, हालसालैका वर्षहरूमा हाम्रो वेबसाइट अधिक र अधिक पाठकहरू समक्ष पुगेको छ। हाम्रो प्रतिबद्धता बढ्दै जारी छ र सबै भन्दा राम्रो सामग्री प्रस्ताव गर्दै।
El बेजिया सम्पादकीय टीम यो निम्न सम्पादकहरु मिलेर बनेको छ।
यदि तपाईं पनि बेजिया लेखन टोली वा महिला दर्शकहरूको उद्देश्यका लागि हाम्रो अन्य कुनै पनि वेबसाइटहरूको सदस्य हुन चाहनुहुन्छ भने, यो फारम भर्नुहोस्.
लेखक, अनुवादक, ब्लगर र आमा। म बार्सिलोना मा केही तीस वर्ष पहिले जन्म भएको थियो, लामो कला, फेसन, संगीत र साहित्यको आदी हुन। जिज्ञासु र केहि प्रकृति द्वारा लापरवाह, सँधै सचेत रहनुहोस् जीवनले प्रदान गर्ने कुनै पनि कुरा नगुमाउनुहोस्!
म सानो भएकोले म स्पष्ट थिएँ कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो। यसैले, म अंग्रेजी फिलोलजी मा एक डिग्री छ। केहि चीज जुन मेरो फेसन, सौन्दर्य वा हालको मामिलाहरूको लागि मेरो उत्कटतासँग पूर्ण रूपमा संयोजन गर्न सकिन्छ। यदि हामी यी सबैमा थोरै रक संगीत थप्छौं भने, हामीसँग पहिले नै पूर्ण मेनू छ।
तीस वर्ष पुरानो र केहि अध्ययन संग ईन्जिनियरिंग को दुनिया को समर्पित संग, त्यहाँ धेरै जुनूनहरु मेरो समय ओगटेको छ। म ती मध्ये एक संगीत अध्ययन गर्ने अवसर पाएँ; दोस्रो को रूपमा, खाना पकाने, म स्वयं-सिकाइएको छु। मैले मेरी आमाको गधेको रूपमा सेवा गरेको हुनाले मलाई यो शौकको मज्जा लागेको छ जुन मैले तपाईंलाई अहिले एक्चुलिडेड ब्लगको साथ साझा गर्न सक्दछु। म यो बिलबाओबाट गर्छु; म सधैं यहाँ बस्दछु, यद्यपि म मेरो काँधमा एउटा झोला बोक्न सक्ने सम्भव स्थानहरू भ्रमण गर्ने प्रयास गर्दछु।
आमा, विशेष शिक्षा शिक्षक, psychopedagogue र लेखन र संचार को बारे मा भावुक। सजावट र राम्रो स्वाद को एक प्रशंसक, म सँधै निरन्तर सिक्ने मा हुँ ... मेरो जोश र मेरो शौकलाई मेरो काम बनाउँदै। तपाईं मेरो भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ व्यक्तिगत वेबसाइट सबै कुरा सचेत हुन।
मेरो सर्वश्रेष्ठ संस्करण खोज्दै, मैले पत्ता लगाए कि स्वस्थ जीवनको कुञ्जी सन्तुलन हो। विशेष गरी जब म आमा बन्छु र आफ्नो जीवनशैलीमा आफूलाई नयापार्जन गर्नुपर्‍यो जीवनको अवधारणाको रूपमा लचिलोपन, अनुकूलन र सिक्ने कुरा यही हो जुन मलाई प्रत्येक दिन मेरो आफ्नै छालामा राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। म दिनको दिन मेरो हातमा बनाउने, फेसन र सौन्दर्यको साथ सबै चीजको लागि भावुक छु। लेखन मेरो शौक हो र केहि बर्षको लागि, मेरो पेशा हो। मसँग सामेल हुनुहोस् र म तपाईंलाई पूरै र स्वस्थ जीवनको आनन्द उठाउन तपाईंको सन्तुलन फेला पार्न मद्दत गर्दछु।
विज्ञापनमा स्नातक, मलाई सबैभन्दा मन पर्ने कुरा लेख्नु हो। थप रूपमा, म सबै चीजसँग आकर्षित छु जुन सौन्दर्य रूपमा मनमोहक र सुन्दर छ, त्यसैले म सजावट, फेशन र सौन्दर्य ट्रिक्सको प्रशंसक हुँ। म अन्य मानिसहरूलाई उपयोगी बनाउन म सुझावहरू र विचारहरू प्रदान गर्दछु।
मनोविज्ञान विद्यार्थी, शैक्षिक मोनिटर र बहु ​​शौकहरूको साथ। मेरो इच्छाको एक लेखन हो र अर्को भिडियो हेरिरहेको छ र सबै चीजहरू पढिरहेको छ सौन्दर्य, मेकअप, प्रवृत्ति, सौन्दर्य प्रसाधन, आदि ... त्यसैले यो ठाउँ उत्तम छ किनकि मँ मुक्त गर्न सक्दछु जुन मलाई मनपर्दछ र दुबै शौकहरू मिक्स गर्न सक्दछु। मलाई आशा छ कि म तपाईलाई यस विषयको बारेमा के कुरा थाहा छ साझा गर्न सक्छु र तपाईले पनि मलाई आफ्नो टिप्पणीको साथ यस शीर्षकको बारेमा सिक्न मद्दत गर्नुहुनेछ। Bezzia पढ्न को लागी धन्यवाद।
सामाजिक नेटवर्क र इन्टरनेट र फेसन मा विशेषज्ञ। मलाई भर्खरको समाचारहरू र महिला सुन्दरताका बारे सुझावहरू राख्न जारी राख्दछु। यदि तपाईं चम्किलो हुन चाहनुहुन्छ भने, हिचकिचाउँनुहोस् र मलाई पछ्याउँनुहोस्!
ब्लगर, डिजाइनर, समुदाय प्रबन्धक ... अस्वस्थ र धेरै चासोहरू जसले मलाई मेरो टाउकोमा पुर्‍याउँछ। म फेसन, सिनेमा, संगीत ... र वर्तमान मामिलाहरू र प्रचलनहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरामा उत्साहित छु। चारै तिर ग्यालिसियन, म पोन्तेवेदरामा बस्छु यद्यपि मैले सकेसम्म स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गरें। म दिनदिनै अध्ययन गर्न सिक्छु र आशा गर्दछु कि यो नयाँ चरण पुरस्कृत नै छ।
म मनोवैज्ञानिक र लेखक हुँ, म कलालाई कला र कल्पित कल्पनाहरूको बहु सम्भावनासँग मिलाउन चाहन्छु। एक व्यक्ति को रूप मा, म पनि आफैंको बारे मा राम्रो महसुस गर्न चाहान्छु, त्यसैले म यहाँ सुन्दर र एकै साथ राम्रो हुन को लागी धेरै सल्लाह दिदैछु।
म मालागामा जन्मिएको थिएँ जहाँ म हुर्कें र अध्ययन गरेँ, तर हाल म भ्यालेन्सियामा बस्छु। म पेशाबाट एक ग्राफिक डिजाइनर हुँ, यद्यपि सजिलो र स्वस्थ खाना पकाउने मेरो उत्कटताले मलाई अन्य चीजहरूमा समर्पित गर्न प्रेरित गरेको छ। मेरो किशोरावस्थामा खराब खानाले मलाई स्वस्थ भान्छामा चासो देखायो। त्यसबेलादेखि मैले मेरो ब्ल्गहरू "द मन्स्टर अफ रेसिपीहरू" मा लेख्न थालें जुन पहिलेभन्दा अझ जीवित छ। अब मसँग अन्य ब्लगमा अधिक रमाईलो रेसिपीहरू साझा गर्न जारी गर्ने अवसर छ वास्तविक अलिअलिडाड ब्लगलाई।
नमस्कार! म मार्ता, समाजशास्त्री र बच्चाहरूको बारेमा भावुक छु। म खेलौनाहरू बारे भिडियो बनाउँछु जुन साना सानालाई सबैभन्दा मन पर्छ। उनीहरूको लागि मनोरञ्जनात्मक हुनुका साथै, उनीहरू ज्ञान प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछन् जसले उनीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक र समाजीकरण प्रक्रियामा मद्दत गर्दछ, उनीहरूको परिवार र वातावरणसँग स्वस्थ र आनन्दित तरीकामा सम्बन्ध राख्न।
श्रृंखला, पुस्तक र बिरालोहरूको बारेमा भावुक Geek केटी। चियाको आदी। म एक धेरै स्पेनिश पोलिश महिला हुँ जसले पनि फेसन मन पराउँछिन् र मलाई लाग्छ कि म यसको बारेमा नयाँ र मौलिक दृष्टिकोण ल्याउन सक्छु। हाम्रो रेरिटीले हामीलाई अद्वितीय बनाउँछ र हामीले उनीहरूको फाइदा लिनुपर्दछ, हाम्रो व्यक्तित्व हाम्रो सफलता र खुशीको कुञ्जी हो।
Carmen Espigares प्लेसहोल्डर छवि
मनोवैज्ञानिक, मानव संसाधन विशेषज्ञ र समुदाय प्रबन्धक। सबै जीवनको र Gana Gna को लक्ष्य को खोजी गर्न। मेरो रुचि केहि? नुहाउने ठाउँमा गाउनुहोस्, मेरा साथीहरूसँग दार्शनिक गर्नुहोस् र नयाँ ठाउँहरू हेर्नुहोस्। एक अन्वेषक पाठक सधैं उनको अनुहारमा रोएको मुस्कानका साथ नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न तयार हुन्छन्। यात्रा, लेखन र सिक्ने मेरो महान जुनसाहरू हुन्। निरन्तर प्रशिक्षण र जीवनमा एक प्रशिक्षुमा, किनभने ... र के हो यदि तिनीहरू हामीलाई जीवित रहन बोलाउँदछन् यदि हामी यो सबै प्रदान गर्दैनौं भने? ...?
शिल्प, शिल्प, रचनात्मक रिसाइक्लि,, मूल उपहार, सजावट, समारोह ... सबै HANDMADE।